जब तपाइँ अंग्रेजी बोल्नुहुन्छ र फ्रेन्च ब्राजिलियनसँग यो के हुन्छ भने फ्रान्सेलीले उनीहरूको नाकहरू मोडिदिन्छन्? - 1aviagem.com
अघिल्लो पोष्ट: नायाग्रा फल्स बनाम फोज डो इगुआऊ सर्वश्रेष्ठ धारा के हो?
अर्को पोष्ट: के क्याफिन र कोकेन ड्रग्स प्रतिबन्धित छन्?
पोष्ट गरिएको 12 मई 2019 द्वारा रोमोमो लुकाना
आज हामी भाषाहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौं र फ्रान्सेलीहरू नाचिरहेका बेला हामी अंग्रेजीसँग बोल्छौं।
ठीक छ, लगभग सबै मान्छे मैले फ्रान्सको बारेमा कुरा गरेको छु, र त्यहाँ त्यहाँ भएका छन्, सधैं दुई चीजले भने:
त्यो त्यहाँ एक सुन्दर र सुन्दर ठाउँ हो।
र यदि फ्रान्सेली बोल्ने हो भने फ्रान्सेलीले उनीहरूको नाकहरू मोडिदिन्छन्।
त्यसैले मैले यो कथा दाँया जाँच गर्न निर्णय गरे।
पहिलो कथन पुरा तरिकाले सत्य हो। वास्तवमा, फ्रान्स एउटा अद्भुत स्थान हो र पेरिसले राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गर्दछ।
प्रत्येक कुनामा, प्रत्येक सडक, जसमा यसले परिवर्तन गर्दछ प्रत्येक दिशा स्मारक, एक फव्वारे, एक वर्ग, एक बगैचा, महान्। यो साँच्चिकै सुन्दर छ!
विन्स्टन चर्चिल पनि तपाईंलाई खुट्टामा जान्छ।
जब कसैले "chic" यात्रामा कुरा गर्छ भने, पेरिसको बारेमा एउटा विचार।
अब फ्रांसीसी बोल्ने बेला फ्रान्सेलीको बारेमा तपाईका नाक घुमाउन दोस्रो बयानमा जानुहोस्।
यो म भन्न सक्छु कि यो आंशिक सत्य हो। तर, योसँग आतिथ्य संग केहि गर्न छैन। यदि कसैले सोचेको हो भने फ्रान्सेली मित्रताहीन छन्, उहाँ गलत हुनुहुन्छ। जसले पनि आतिथ्यको बारेमा सोचेको विवरणले निश्चित रूपमा चीजको आत्मालाई समात्न सकेन।
फ्रान्समा मेरो पहिलो यात्राको आधारमा म ईमानदारीपूर्वक मात्र भन्न सक्छु कि मैले फ्रान्सेली धेरै मित्रता, मेहनती र सत्कार गर्ने पाएको छु। र वास्तवमा तपाईंको नाक घुमाउन यदि अंग्रेजी बोल्नु हुन्छ वास्तवमा एक भाषा अवरोध हो।
यो "अनुहार?" को अनुहार अभिव्यक्ति हो के? कसरी?
सच्चाइ हो कि अंग्रेजी फ्रान्सेली भाषा एक फरक भाषा हो। र फ्रान्समा तिनीहरूले फ्रेन्च बोल्छन्। निस्सन्देह!
हो त्यहाँ ठाउँहरू छन् जहाँ तपाईं अंग्रेजी बोल्न सक्नुहुन्छ, विशेषगरी पर्यटक स्थानहरूमा। तर अंग्रेजी तिनीहरूको दोस्रो भाषा होइन। (कास्टिलीको प्रयास गर्नुहोस्)।
EF PI (ईएफ मा फ्रेंच प्रवीणता सूचकांक) को अनुसार फ्रान्स 35 ° प्लेसमेंट 88 देशों को बीच मा छ। यसको अर्थ उनीहरूमा अंग्रेजीमा मध्यम दक्षता छ। (स्रोत: https://www.ef.com.br/epi/ पहुँच: 11 मई 2019)
अब रोक्नुहोस् र सोच्नुहोस्, एक फ्रान्सेली ब्राजिल आइपुग्यो र अंग्रेजी बोल्न थालेमा त्यहि कुरा हुनेछ। तपाई के सोच्नुहुन्छ? प्रायजसो ब्राजिलहरूले त्यो के बुझ्न सकेनन् र "उनीहरूको नाक मोडिदिन्छन्" र जस्तो देखिन्छ: हुह?! कसले? कसरी? उसले के सोध्छ?
वैसे, उही ईएफआई पीआई प्रवीणता सूचकांक प्रयोग गरेर ब्राजिलले 53 देशहरूको 88 स्थितिमा राख्छ। (35 देखि 53 लाई भर्खरै उल्टाइन्छ)।
यो 2014 विश्व कप र 2016 ओलम्पिकको समयमा के भयो। के देखेको थियो पर्यटकहरूको बाढी आश्चर्यचकित हुन्थ्यो किनभने तिनीहरू अंग्रेजीमा कहिलेकाहीँ र कहिलेकाँही स्पेनिश (वा कास्टिली) मा।
हो, ब्राजिलमा कुन कुराको बारेमा सोच्ने कुराको विपरीत होईन स्पेनमा बोल्दैन, बोल्न पोर्चुगल बोल्छ। कास्टिलियन ब्राजीलियनहरूलाई बुझ्न सजिलो छ, किनकि पोर्चुगल र स्पेनिस दुवै लैटिन मूलको हो। तर तिनीहरू फरक भाषाहरू छन्।
फ्रान्सेलीसँग पनि लैटिन रूट र जर्मन रूट छ। यसरी, अंग्रेजीमा भन्दा फ्रांसीसीसँग पोर्चुगल वा स्पेनिसमा कुराकानी गर्न सजिलो छ। पछि एक एङ्ग्लू-सक्सन भाषा हो। भविष्यमा अंग्रेजीले जर्मन र फ्रांसीसी प्रभावहरू सामना गर्नेछ, तर हामी मूलमा रहनेछौं।
वास्तवमा, हामी फ्रान्सेलीसँग समान छौँ, यो राम्रोसँग प्रतिक्रिया गर्न यो इच्छुकता, यो सहानुभूति। हामी भाषा बाधा पार गर्न खोज्छौं। म यहाँ मेरो भण्डार, पसलहरू, लंच बक्सको विक्रेताहरू, सबवे टिकटहरूको प्रत्येकको लागि धन्यवाद। र फ्रान्सेली र ब्राजीली स्वयंसेवकहरू। मैले आफैंलाई विश्व कपको समयमा ब्राजिलियामा केहि5वा6पर्यटकहरूलाई सहयोग पुर्याउनु पर्छ। र म त्यहाँ धेरै सहयोग गरिरहेको थियो।
खैर, पहिले हाम्रो पेरिसमा पहिलो दिन हामीसँग त्यो अनुभव थियो। हामीले फ्रान्सेली बोल्न कसरी थाहा थिएनौं। र हामी दोपहरको भोजन पछि केही थियौ। त्यो हो, हामी भोकाएका थियौँ र अझै सट्टाका साथ अपार्टमेन्ट खोज्दै।
हामीले दोपहर का भोजनको लागि एक स्न्याक पट्टीमा रोक्यौं। र जब म त्यहाँ पुग्छु म अंग्रेजी मा केहि लाग्न चाहन्छु। परिचरले मलाई देख्यो, हूको अनुहार बनायो?! के? कसरी? र उहाँले मलाई प्रतीक्षा गर्न को लागी आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अर्कोलाई बोलाउनुभयो जसले अंग्रेजी बुझ्यो। त्यसपछि तिनीहरूले मलाई कसरी काम गरे भनेर बताए। र कस्तो खाना बनाइएको थियो।
चाँडै पछि, जब हामी उपस्थित खाने खायौं भने देखा पर्यो हामीले पोर्चुगलमा बोलेका थियौं, त्यसपछि उनले पोर्चुगलमा हामीलाई सम्बोधन गरे र भने: यदि तपाईलाई अरू कुरा चाहिन्छ भने तपाइँ बोल्न सक्नुहुन्छ, र यदि तपाई पोर्चुगलमा मनपर्छ भने, म पोर्चुगल हुँ!
र हामी धेरै स्थानहरु मा गएर हामी सधैं "बोनोज" (सुप्रभात), "बोनसो" (शुभ साँझ) "बो एपटेटिटि" (राम्रो भूख) संग उपचार गरिरहेको थियो। कहिलेकाँही इशाराहरू र हामी के चाहानुहुन्छ इंगित गर्दै हामी चीजहरूको लागि सोध्न सफल भयौं। अन्य पटक हामी अंग्रेजी पनि प्रयोग गर्दछौं। र हामी जहाँ गएका थिए, हामी फ्रेन्च फ्रान्सेली सँगै एकदमै मित्रसंगै थियौ।
त्यसकारण, पाठको सुरुवातमा दुई बयानहरू जवाफ दिँदै।
हो, त्यहाँ सुन्दर र सुन्दर ठाउँ हो।
र हो। यदि तपाई ब्राजील सहित अन्य देशहरूमा गरिएको छ भने अंग्रेजी बोल्दै आइपुग्दा मित्रतावादी फ्रान्सेलीहरूले आफ्ना नाकहरू रूट गर्नेछन्।
एक गली र अर्को पटक म पेरिस बारे स्थानहरु मा सुझाव संग कुरा गर्छु।
Au revoir (अलविदा)।
तलका नक्सामा क्लिक गरेर हाम्रा अन्य पोष्टहरू हेर्नुहोस्:
तीर संयुक्त राज्य अमेरिका